AMBALAVAO : HIVIDIANAN’IREO MPANAO HOSOKA FAHANA FINDAY NY VOLA SANDOKALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYAMBALAVAO : HIVIDIANAN’IREO MPANAO HOSOKA FAHANA FINDAY NY VOLA SANDOKA
AMBALAVAO : HIVIDIANAN’IREO MPANAO HOSOKA FAHANA FINDAY NY VOLA SANDOKA
Mahita paikady vaovao hatrany ireo mpanao vola sandoka. Ohatra amin’izany ny nitranga tao an-tampon-tanànan’Ambalavao, afak’omaly maraina. Lehilahy iray no nitety ireo tsenakely sy toeram-pivarotana fahana finday ary nividy izany tamin’ny alalan’ny vola tsy tena izy.
“Tsena maro no efa voatetiny ary isan’izany ny ivon-toerana lehibe an’ny tambajotram-pifandraisana aty an-toerana. Fahana aman’aliny no efa voaangony tao anatin’ny ora vitsy”, araka ny fanazavana voaray avy eo anivon’ny mpitandro ny filaminana any an-toerana.
Teo am-pividianana fahana hafa tao amina toeram-pivarotana enta-madinika anefa izy no nisy nahatsikaritra. Ilay mpivarotra tao amin’io tsena io no nitaky ny hamerenana ilay fahana novidiany tamin’ilay vola tsy tena izy saingy nandà an-kitsirano ilay tovolahy. Teo no nantsoin’ny manodidina haingana ireo Polisy izay nandrindra ny fifamoivoizana nanoloana ilay tsena ka noraisim-potsiny ity farany. Nohamarinina teo ihany mantsy ilay vola ka voaporofo fa hosoka ary nosavaina izy taorian’izay ka nahatrarana vola sandoka 2 alina ariary 15 isa tany anaty kitapony.
Taorian’izay dia nanomboka ny famotorana azy ary nataon’ireo Polisy izay nanomezany ny laharan-taribian’ny namany hafa. Nofandrihana tamin’ny alalan’ny antso tamin’ny finday ity farany mba hitondra ireo vola hosoka ambiny. Rehefa natambatra ireo vola hosoka tratra tany amin’ilay lehilahy sarona voalohany sy ilay voafandrika dia fantatra fa nahatratra 1,38 tapitrisa ariary.
Hatramin’ny omaly moa dia fitoriana ampolony avy amina mpivarotra no voarain’ny Polisy izay naharay ireo vola sandoka ireo. Na izany aza dia tsy mbola ireo atidoha nikotrika ireto tratra ireto, hoy ny Polisy mpanao famotorana. Ary azo antoka fa mbola miery ao Ambalavao ireo mpaniraka miaraka amin’ny fitaovany.
Partager la publication "AMBALAVAO : HIVIDIANAN’IREO MPANAO HOSOKA FAHANA FINDAY NY VOLA SANDOKA"